ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံထံမှ တန်ဖိုးကြီးလက်စွပ်လေး မွေးနေ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်လေး – XB Media Myanmar
ပရိသတ်တွေ သဘောကျပြီး ကျေနပ်နှစ်သက်မှုရှိအောင် အနုပညာအလုပ်တွေကို အပီအပြင်ချပြပေးနေတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် အောင်လေး ကတော့ ယခုကျရောက်တဲ့ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ အသက် ၂၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လေးကတော့ ယခုကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ အရမ်းကို ကံကောင်းလွန်းတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးနေ့လေးမှာ အရမ်းကို ကံကောင်းသွားခဲ့တဲ့ အောင်လေးကတော့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးထံမှ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် တန်ဖိုးကြီး လက်စွပ်လေးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှာ တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်လေး ရရှိခဲ့လို့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေခဲ့ရတဲ့ အောင်လေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးထံမှ မွေးနေ့လက်ဆောင်လေး ရရှိခဲ့ရတဲ့ အောင်လေးကတော့ ” Zz. Gems & Jewellery opening .. မွေးနေ့ လက်ဆောင် လက်စွပ်လေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အကိုနဲ့အမ
ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးထံမှ အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လက်စွပ်လေးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ အောင်လေးရဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးကလည်း ချစ်စရာလေးနော်
အောင်လေးရဲ့ ယခုကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးနဲ့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးထံမှ တန်ဖိုးကြီး လက်စွပ်လေးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိခဲ့ရလို့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေရတဲ့ အောင်လေးကို အားကျမိတယ်ဆိုရင် ဒီပို့စ်လေးကို မျှဝေပြီး အားပေးသွားကြပါဦးနော်။ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်းကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။
ပရိသတျတှေ သဘောကပြွီး ကနြေပျနှဈသကျမှုရှိအောငျ အနုပညာအလုပျတှကေို အပီအပွငျခပြွပေးနတေဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျော မျောဒယျ သရုပျဆောငျ အောငျလေး ကတော့ ယခုကရြောကျတဲ့ ဇနျနဝါရီလထဲမှာ အသကျ ၂၇ နှဈပွညျ့ မှေးနဖွေ့ဈတယျလို့ သိရှိရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အောငျလေးကတော့ ယခုကရြောကျတဲ့ မှေးနလေ့ေးမှာ အရမျးကို ကံကောငျးလှနျးတယျလို့ ပွောရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မှေးနလေ့ေးမှာ အရမျးကို ကံကောငျးသှားခဲ့တဲ့ အောငျလေးကတော့ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့တို့ ဇနီးမောငျနှံ နှဈဦးထံမှ မှေးနလေ့ကျဆောငျအဖွဈ တနျဖိုးကွီး လကျစှပျလေးကို မှေးနလေ့ကျဆောငျအဖွဈ ရရှိခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မှေးနမှေ့ာ တနျဖိုးကွီး လကျဆောငျလေး ရရှိခဲ့လို့ အရမျးကို ပြျောရှငျနခေဲ့ရတဲ့ အောငျလေးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဇငျဇငျဇျောမွငျ့တို့ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးထံမှ မှေးနလေ့ကျဆောငျလေး ရရှိခဲ့ရတဲ့ အောငျလေးကတော့ ” Zz. Gems & Jewellery opening .. မှေးနေ့ လကျဆောငျ လကျစှပျလေးပေးလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ..အကိုနဲ့အမ
ဇငျဇငျဇျောမွငျ့တို့ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးထံမှ အရမျးကို တနျဖိုးရှိလှတဲ့ လကျစှပျလေးကို မှေးနလေ့ကျဆောငျအဖွဈ ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ အောငျလေးရဲ့ လကျဆောငျပစ်စညျးလေးကလညျး ခဈြစရာလေးနျော
အောငျလေးရဲ့ ယခုကရြောကျတဲ့ မှေးနလေ့ေးအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးစကားလေးနဲ့ ဆုတောငျးပေးရငျး ဇငျဇငျဇျောမွငျ့တို့ ဇနီးမောငျနှံ နှဈဦးထံမှ တနျဖိုးကွီး လကျစှပျလေးကို မှေးနလေ့ကျဆောငျအဖွဈ ရရှိခဲ့ရလို့ အရမျးကို ပြျောရှငျနရေတဲ့ အောငျလေးကို အားကမြိတယျဆိုရငျ ဒီပို့ဈလေးကို မြှဝပွေီး အားပေးသှားကွပါဦးနျော။ ကွညျ့ရှုအားပေးကွပါသော ခဈြပရိသတျမြားအပေါငျးကို ကြေးဇူး အထူးတငျရှိပါတယျ။